အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၇
Posted by kai on Aug 3, 2017 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 21 comments
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - သြဂုတ်လ ၂၀၁၇
သြဂုတ်လထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ။
☑️ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင်၊ ဘိုဖြူ၊ ဖိုးကာ၊ ဖြိုးကြီးတို့ရဲ့ U.S. ဖျော်ဖြေပွဲမျက်နှာဖုံးသတင်း။
☑️ Burmese Welfare Association ရဲ့ အကြိမ်၂၀မြောက် Eid Potluck
☑️မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ကိုအံ့ကြီး၊ ကိုတင်မိုးနဲ့ ၀င်းဖေသုံးယောက် ဆောင်းပါး။
☑️၀င့်ပြုံုးမြင့်ရဲ့ မီဇိုတို့သည် ပျောက်ဆုံးဂျူးဇာတိနွယ်လော ဆောင်းပါး။
☑️Las Vegas က တေးသံရှင်နေသန်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း။
☑️ခေတ်စမ်းလုလင် Nyein Chan San
☑️တိမ်မည်းရဲ့ အင်တာနက်ထဲကပိုက်ဆံ Bitcoin ဆောင်းပါး။
☑️U. S. ပြည်နယ်အသီးသီးက မြန်မာမိသားစုများရဲ့ ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲသတင်းဓာတ်ပုံများ။
☑️လစဉ်ဖော်ပြနေကျဆရာမျိုးကျော်မြင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး။ ကဗျာ။ ကာတွန်း။ ဗေဒင်။ သုတရသစုံလင်စွာ ဓာတ်ပုံဝေေ၀ဆာဆာနဲ့
မြန်မာစတိုးဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်များမှာ အခမဲ့ရယူပါ။
“ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဗီဇာမလိုဘဲ ပြည်ဝင်ခွင့်ရမည်”
အမေရိကားမှာ ၆၆ ဃ လာတော့မယ်လား..။
BY JONATHAN EASLEY – 08/04/17 11:32 AM EDT 9,048
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ယူလို့ရလဲဟင်… ဖတ်ချင်လို့ပါ…
အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ နှစ် ၇၀ ခရီး နှိုင်းယှဉ်ချက်..
INDIA Updated: Aug 15, 2017 00:36 IST
အဲဒီအထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုကို ဖယ်ပစ်ဖို့ တခြားပိုကောင်းတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်.. တဲ့..။
By Derrick Lewis, Amy Cutler and CBS North Carolina
Published: August 14, 2017, 6:38 pm Updated: August 15, 2017, 6:12 am
Governor Roy Cooper ✔ @NC_Governor
6:11 PM – Aug 14, 2017
ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလုပ်ပ.. စီးပွားရေးလဲလုပ်ပ… ပေါ့..။
August 12, 2017 4:49 am JST
Myanmar must balance peace with development, says Suu Kyi
NAYPYITAW — Neither economic development nor peace with Myanmar’s ethnic minorities can succeed without the other, de facto leader Aung San Suu Kyi toldaforum on the Southeast Asian nation’s democratic transition, signalingamore balanced policy approach is on the way.
သတင်းတွေနောက်တောင် မလိုက်ဖြစ်တာ ကြာပေါ့။
အသက်ကြီးလာလေလေ ရသနောက် လိုက်လာလေလေ…
ထရမ့်က အစိုးရပိတ်သိမ်း( အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေလစာပေးဖို့ ဘက်ဂျက်မရှိ) ရင်တောင်.. မက်ဟီကိုပြည်နဲ့ အမေရိကားနယ်စပ်တံတိုင်းရအောင်ဆောက်မယ်ဆိုတာပဲ..။
Trump: I’m building the wall even ‘if we have to close down our government’
“If we have to close down our government, we’re building that wall,” Trump said
Published 10:57 PM ET Tue, 22 Aug 2017 | Updated 11 Hours Ago
ဒီကိစ္စ ဘက်တွေအများကြီး.. ဆိုပဲ..။
President Trump has been criticized for referring to “violence on many sides” in Charlottesville, Va., but not calling out white nationalists, during his remarks Saturday in Bedminster, N.J.
$758.7 million မှာ.. အစိုးရက ၄၂၂.၇ မီလီယံဒေါ်လာ… အခွန် ချသမို့.. ကျန်တာ.. $336 million
The winner of the largest single lottery prize in U.S. history has already quit her day job, the Associated Press reports.Fifty-three-year-old Mavis Wanczyk,anow-former hospital worker in Chicopee, Mass., claimed the Powerball jackpot, which climbed toanear-record $758.7 million Wednesday night. She reportedly took the lump sum, which netted her $336 million after taxes.
AUG 25 2017, 1:57 PM ET
အခုတော့Indian Guru ကို ထောင်နှစ် ၂၀ ချလိုက်ပြီတဲ့…ဒီနေ့မနက် VOA သတင်း
မြန်မာအစိုးရ.. ဒုန်း.. ဒုန်း..။
အီးမေးလ်၊ ဆဲလ်ဖုံးနဲ့.. လက်ဗွေ ၁၀ခုနဲ့ မျက်လုံးသူငယ်အိမ်ကိုပါ သိထားတဲ့ အိုင်ဒီစနစ်
By Surabhi Agarwal, ET Bureau|Aug 26, 2017, 10.31 AM IST
NEW DELHI: The Supreme Court verdict declaring privacy asafundamental right will not put an end to Aadhaar since all the current usage of the unique identity number falls under the reasonable restrictions which have been outlined in the judgement. Aadhaar can continue to be linked with subsidy schemes since reasonable restrictions laid down by the Court include prevention of “dissipation of welfare benefits,” Ajay Bhushan Pandey, CEO of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) told ..
အသားအရောင်၊ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုးကွယ်ရာမတူတာကို မုန်းတီးစက်ဆုပ်ရက်နဲ့ ဘယ်ကလေးမှ မွေးမလာ..။
Updated 3:51 PM ET, Wed August 16, 2017
Washington (CNN)Former President Barack Obama’s tweet reacting to the attack in Charlottesville, Virginia, is the most liked tweet ever on the social network.
16 August 2017 08:06(+0630) (10 ရက် ခန့်က)
ရောဘတ်မူလာ.. ထရမ့်ကို ချောင်ပိတ်ဖမ်းထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း..။
The presidential pardon only applies to federal crimes.
သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်က.. ဖယ်ဒရယ်ရာဇ၀တ်မှုမှရတယ်ဆိုပဲ..။ :k